Shina: Fitroarana Tao Guangdong, Ao Haimen Ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2011 3:49 GMT
Tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa, maro ireo hetsi-bahoaka nitranga tao amin'ny faritr'i Guangdong. Raha efa eo an-dalàm-pikarohana vahaolana ny fitroarana tao amin'ny tanànan'i Wukan noho ny naneken'ny governemantan'ny Shanwei ny hampiato ny tetikasam-pampandrosoany ary namerina ny tany amin'ireo tantsaha, tanàna iray hafa, Haimen, eo akaikin'ny tanànan'i Shantou no nanomboka ny fanentanany faobe ho fanoherana ny fananganana toby famokarana herinaratra faharoa ao an-tanàna. Mponina an'arivony no nanao fahirano ny governemanta n'ny tanàna ary nanakàna ny sampanan-dalana eo anelanelan'i Shenzhen sy Shantou, mitaky amin'ny governemantan'i Haimen mba hanajanona ilay tetikasam-pananganana.
Miaraka amin'ny hetsi-panoherana iray hafa tao Shantou ny 18 Desambra izay mbola mikasika ny fangalàna tany tsy ara-dalàna ihany koa, ireny tranga misesisesy ireny dia maneho ny tsy fahombiazan'ny rafitra fanaraha-maso “weiwen” amin'izao fotoana natao ho fihazonana ny fahamarinan-toerana amin'ny famahàna ifotony ny disadisa isan'andro.
fycanly, mpampiasa ny Sina Weibo dia miblaogy mikasika ny tantaran'ny fitroarana ao Haimen:
Ny seranan-tsambon'ny jono ao Haimen dia seranan-tsambo nasionalin'ny jono “sokajy A” ary foiben'ny jono. Lianhua, tendrombohitra ao an-tanànan'i Haimen, hita ao Shantou, distrikan'i Qiaoyang, dia voasokajy ho sokajy “AAA” amin'ny valan-javaboahary. Ny fidiram-bolan'ny mponina ao Haimen dia miankina amin'ny jono, na dia izany aza i Haimen dia niaritra fijaliana tamin'ny loza voajanahary nitranga hatramin'ny Jona 2006.
Ireo mponina avy ao Haimen dia mahafantatra daholo fa ny herin'ny indostria Huaneng dia miankina amin'ny rano avy any an-dranomasina mba hampangatsiatsiaka ny ao aminy. Rehefa misintona rano avy any an-dranomasina izy ireo, dia misy makamba sy trondro be dia be voatrokan'ilay fitaovana fampangatsiahan'izy ireo ary voaloto. Misy ny olona mivarotra ireo hazan-dranomasina voaloto ireo eny an-tsena. Huaneng dia nilaza fa miaro ny tontolo iainana izy ireo, kanefa ny taona 2011 ilay orinasa dia voasazin'ny biraon'ny tontolo iainana ao Guangdong RMB 20 tapitrisa tamin'ny fanariany mivantana rano maloto tany an-dranomasina.
Taona vitsy lasa izay,niala tao amin'ny faritra ireo mpanam-bola ao Haimen, namela ireo mahantra hijery io ampahan-tany mahafinaritra io mihasimba. Iza no hijoro mba handray andraikitra amin'ny ho avin'ny fiainan'ny mponina ao Haimen sy ny taranaka ho aviny? Iza no hijoro mba handray andraikitra amin'ny ranomasina voaloto ? Ny haben'ny seranan-tsambon'i Haimen dia eo amin'ny 1.9 tapitrisa metatra toradroa eo ho eo ary manana sambo mpanjono eo amin'ny arivo mahery eo ho eo. Ny vokatray isan-taona dia mihoatra ny 180 000 taonina.
Ankehitriny isika dia hanana toby faharoa famokarana herinaratra ato amin'ity tanàna ity, izay ny olona dia miankina amin'ny jono mba ho fivelomany. Noho ny fanapariahana rano maloto, dia mihavitsy ny trondro. Ny governemanta foibe sy ny any amin'ny faritra dia namoaka antotan-taratasy ara-panjakana mba hamehezana ny firoboroboan'ny orinasa mpandoto, koa maninona ary no mbola eken'ny governemantan'ny tanàna ihany ilay tetikasa? Tamin'ny taona lasa, ny tahan'ny fahafatesana tsy voajanahary no avo indrindra tao amin'ny faritanin'i Guangdong, io no sandan'ny loza ara-tontolo iainana.
Maro tamin'ireo mpampiasa ny Weibo no manely ny fanamarihan'i fycanly :
Fuson : Nandritra ny fananganana ny orinasa mpamokatra herinaratra voalohany, dia nirodana ny “platforme” iray , nahafatesana mpiasa 6 ary tena andratra mafy olona 2 hafa. Ankehitriny ny isan'ny olona voan'ny homamiadana dia mihamitombo hatrany. Ny dadako koa dia maty noho io homamiadana io tamin'ny fanombohan'ity taona ity. Amin'izao ny governemanta dia mitady hanorina iray hafa, tsy afaka ny ho tanterahana izany. Ilay tanindrazantsika tsara tarehy iny, ankehitriny dia voaloto tanteraka. Ho an'ireo mponina 100.000 namako ao Haimen, andao hijoro. Tsy ho fanakorontanana izany, fa mila mampiseho isika hoe tezitra.
Olona an'arivony no nanakàna ny fidirana eo amin'ny lalana manapaka. Ireo Sary tena nivezivezy be tao amin'ny Weibo
Marina mafy, tena tezitra be ireo mponina ao Haimen. Na dia teo aza ny fanakatonan'ireo sekoly ny vavahadiny sy ny faneren'izy ireo ny ankizy hijanona ao amin'ny faritry ny sekoly ary ankoatra io hetsi-panoherana androany io, mponina avy ao Haimen an'arivony no nidina an-dalambe. Ito manaraka ito ny kaontin'ireo mpampiasa Weibo momba ny zava-misy ao Haimen androany:
Anio dia andro iray miavaka ho an'ny mponina ao Haimen. Amin'ny fijerena ireto sary izay nakarina tao amin'ny Weibo ireto fotsiny, dia afaka ho tsapanao ny firaisan-kina misy eo amin'ny mponina ao Haimen. Ny mponina dia tsy afaka ny hangina intsony amin'ilay tetikasa fandotoana goavana. [Ny manam-pahefana] dia mino fa afaka hampiato ireo mpianatra amin'ny fanomezana azy ireo paty eran'ny kaopy, mahatsikaiky. Mila mahalala manaja ny fomba fijerin'ny vahoaka ry zareo fa tsy hamoritra fotsiny azy ireo. Ry mponin'i Haimen, azafady re mba manomeza ohatra tsara ho anay.
Ny tanànan'i Haimen ao amin'ny distrikan'i Qiaoyang, ao an-tanànan'i Shantou, faritanin'i Guangdong, dia eo an-dalam-pananganana orinasa mpamokatra herinaratra ahodin'ny arintany voadotra. Efa nisy orinasa iray mpamokatra herinaratra efa namotika an'i Haimen, ankehitriny izy ireo dia mitady ny hanangana iray hafa indray. An'arivorivony izao ireo mponina avy ao Haimen no mihodidina ny governemantan'ny tanàna, ary dia tsy mbola manome valinteny ihany ireo manampahefana ao amin'ny governemanta. Ny departemantan'ny fampianarana dia nanome toromarika ny sekoly mba hitazona ny mpianatra aorian'ny ora fianarana. Tsy afaka ny hanao na inona na inona izahay eto.
Ny tsena rehetra ao Haimen dia nakatona daholo nanomboka tamin'ny 11 atoandro. Ny olona dia nanangona rano amin'ny tavoahangy sy sakafo eo amin'ny fidirana ny sampanan-dàlana ary mizara izany maimaim-poana ho an'ireo mpanao fitakiana. Ireo vavolombelona dia milaza fa misy olona 30.000 farafahakeliny teo amin'ilay sehatra. Mbola maro no eny an-dalana. Izany no atao hoe firaisankina.